Ny tsikitsak'i Brexit dia drafitra efa voarindra mialoha: Martin Vrijland
Filed in NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	amin'ny 4 September 2019	• 10 Comments
Ny ady lehibe Brexit dia drafitra efa voarindra mialoha. Ireo izay nanaraka an'io tranokala io nandritra ny fotoana ela dia afaka namaky azy ireo imbetsaka, fa aleo averintsika jereny indray. Raha hitanao fa ny mpanao politika tsirairay dia mpilalao ihany izay mitana ny lanjan'ny fandaharam-pandrosoana manerantany ary miasa mangingina ho an'ny aristokrasia dia ho hitanao fa ny ady hevitra Brexit dia manompo ny fandaharam-potoana amin'ny fanatontoloana. Tsara hoy ianao:Eny, fa ny Brexit dia manohitra ny EU ary noho izany manohitra ny fahefana lehibe kokoa". Izay ny hevitra izay nofidinin'ny mpanao politika sy ny media. Ny Brexit dia natao foana mba hamaranana ny tsy fahombiazana.
Izany dia fihetsika ao amin'ny trano ambany britanika, amin'ny alàlan'ny Theresa May mifanandratra amin'i Jeremy Corbyn sy ny fisavoritahana rehetra momba ny fifanarahana tsara na ratsy izay tokony hanome fahatsapana fa miatrika dingana politika tena izy. Theresa May dia tsy nahazo ny fankatoavana ny fifanarahana ary tsy maintsy nandoa lalana ny hardliner Boris Johnson ary ny fivoarana farany dia tena manaitra tanteraka, miaraka amin'i Johnson manery ny hanery an'i Brexit tsy misy dikany ary ny parlemanta britanika miezaka manohitra izany indray. (jereo ny maimaika fihetsiketsehana tao amin'ny Tranon'ny anglisy anglisy. Tsy mampientanentana ve ianao? Hitanao ny asan'ny mpilalao ambony; nantsoina koa hoe 'mpanao politika'.
Nantsoiko foana io: ny Brexit dia tsy maintsy mampiseho an'i Eoropa manontolo fa rehefa te hiala amin'ny EU ianao dia hahatsapa izany ao am-paosinao. Voalohany, fananganana mitandrina no natao mba hanamafisana ny fandehan'ny anti-EU. Raha ny marina dia hitanay maneran-tany fa ny iray sy ny marika mitovy dia natsangana tamim-pitandremana: ny marika 'mety'. Izany dia nanomboka tamin'i Nigel Farage sy ny ekipany ao amin'ny Vondrona Eropeana, izay nanaporofo tamin-kafanam-po sy tamim-pitandremana ilay biby goavan'ny administratif. Any Etazonia dia i Donald Trump izay misolo tena ny marika eo amin'ny ankavanana sy any Brezila Jair Bolsonaro. Any amin'ny firenena EU hafa dia mahita anarana toa ny Marine Le Pen, Thierry Baudet ary azonao atao ny mamita ny lisitra. Ity marika 'havanana' ity dia mifikitra amin'ny hevitra sasany izay manana toetra mitovy. Ny ankamaroan'ny fotoana dia tia tanindrazana izy ireo, mitsikera ireo olana ara-tantara (izay azo raisina ho "hevi-tsofina") ary miezaka ny fiarovana mafy ny toekareny. Avy amin'izany dia afaka fantarinao fa mifandraika amina pailà mitovy ihany isika, na dia mety ho toa mifanohitra aza izany. Hazavaiko ny.
Ny antony nanamboarana io marika «tsara» io dia satria ny rà mpitondra aristokratika mpitondra (izay ananan'ireo mpisehatra ireo dia ny paikady mampandroso ny fihetsika politika ataon'izy ireo mba hinoanao fa tena misy ny demokrasia) dia fantaro fa misy fihoaram-pefy lehibe tokoa fihetseham-po eo amin'ny mponina manerana izao tontolo izao, manohitra ny fandaharam-potoana amin'ny fanatontoloana. Inona no azonao atao tsara noho ny fanitarana be ity marika ity ankavanana amin'ny alàlan'ny fijerena fampahalalam-baovao marobe ary fanaovana ankasitrahana tanteraka ny hetsika ara-politika, ary avy eo dia mahatonga azy ireo ho tompon'andraikitra amin'ny faharavan'ny toe-karena; araky ny korontana ara-tsosialy lehibe? Raha mitondra ny antsasaky ny mponina manerantany amin'ireo sambon'ny fiaramanidina havanana ianao ary avy eo miantoka fa afaka mandray andraikitra ny korontana sy ny fianjerana, dia afaka manondro an'io fiaramanidina elatra havanana io sy ny olona rehetra eny ambonin'ny sambo ianao.
Ny baomba ao ambanin'ny sambon'ny fiaramanidina havanana ankehitriny dia atsangana efa ho saika miaraka. Ny tranokala alt-market.com manazava tsara hoe ahoana ny fikasan'ny globalista efa ela no nikasa ny hirodanan'ny toekarena amerikana teo ambany faran'i Trump. Alaiko ny toerana ahitantsika zavatra mitovy any Angletera izay misy marika eo amin'ny ilany havanana. Na tsia ny fifanarahana Brexit na ahemotra ny Brexit amin'ny alàlan'ny fikomiana ara-politika kokoa na fifidianana vaovao hotontosaina: rava tanteraka ny toekarena britanika ary mitarika ny sisa amin'i Eropa.
Miaraka amin'ny fandravana fanapahana avy amin'ny marika eo ankavanana dia naharesy fandresena lehibe ho an'ny fandaharam-pandrosoana ho an'ny agenda manerantany ianao. Ny olona malemy amin'ny fiaramanidina havanana rehetra dia hohanin'ny sisa amin'ny mponina ary tery ambony volo sy volom-borona. Taorian'izay dia mety hihemotra eny an-tsisin'ilay sambo matoky efa antitra izay hanohy ny lalana mankany amin'ny fanatontoloana sy fanentanana ny fahefana ireo mpieritreritra feno tsikombakomba. Ny rendremana dia azo sasana eo ambanin'ny tsindry avo be. Io vondrona manakiana io, raha ilaina, dia maniry azy io ho hafa dia ampanginina tanteraka izy. Tonga eo am-pialan'ny korontana efa vita any Etazonia sy Eoropa isika (vokatry ny dingana Brexit izay voatendry ho fahatongavana amin'ny adihevitra iray). Buckle ny fehikibonao, Dorothy! (Vakio ny eto ny fandrosoana)
Lisitry ny rohy loharano: RT.com
Ny fanapotehana mifehy ny marika 'rechts', Trump, ny Brexit (ary izay rehetra mifandray aminy) dia nanomboka.
Moa ve i Ursula von der Leyen (filoham-pirenena EU ho avy) miaraka amin'ny rà tokana toy ny fianakavian'ny mpanjaka britanika?
TOROHEVO: ny rejuvenation pill dia zava-misy! 80 Ny lehilahy iray taona dia nitelina voalohany taorian'ny fitsapana biby
Tags: Boris Johnson, Brexit, fifanarahana, debacle, Featured, Jeremy Corbyn, Tranon'ny trano anglisy, tsy misy fifanarahana, parlemanta
4 Septambra 2019 ao amin'ny 02: 50
Ary hamita ilay tantara, ny vondrona elatra havanana dia mifamatotra amin'ireo rehetra nanapoaka tifitra (anisan'izany ilay fandripahana tany Serbia) izay hitantsika tao amin'ny haino aman-jery fa vaovao sandoka (psyops) tato anatin'ny taona vitsivitsy. Miaraka amin'izany, ny marika «elatra havanana 'dia aseho ho mainty fanampiny. Ity fomba ity dia ataonao mampidi-doza sy adala kokoa.
4 Septambra 2019 ao amin'ny 06: 23
Ianao dia 100% marina!
4 Septambra 2019 ao amin'ny 09: 06
Fantatro tsara fa charade lehibe ity. Ireo saribakoly rehetra ireo dia raisin'izy ireo hotanterahina hatramin'ny farany, amin'ny fanaintainan'ny ... Saingy misy zavatra lehibe kokoa: Ny Zio Nazi Cabal dia maty taorian'ny fahafatesana ary mbola ho avy ny miandry!
4 Septambra 2019 ao amin'ny 09: 08
4 Septambra 2019 ao amin'ny 09: 13
Lahatsoratra maranitra indray, misaotra.
Mety ho lohahevitra mahafinaritra ho an'ny Faculty of Society: -) - ary siansa momba ny fitondran-tena amin'ny UVA.
Raha mbola mitory ny demokrasia ny mpampianatra dia andao maminavina
4 Septambra 2019 ao amin'ny 12: 22
Boris Johnson taranaky ny fianakaviana teratany Tiorka (Ottoman) mety hanomboka ny korontana any Eropa; ny korontana izay hiverenan'ny Fanjakana Ottoman:
Avy amin'ny Wikipedia, ny rakipahalalana malalaka
Hitsambikina Hanketo Fikarohana hotsidihina
Amin'ity anarana tiorianina Ottoman ity, Ali Kemal no omena anarana, ary tsy misy anaram-pianakaviana.
Ao amin'ny birao
4 martsa 1919 - 20 jona 1919
Ny praiminisitra Damat Ferid Pasha
Nialohan'i Mehmed Ali Bey
Fahombiazana nataon'i Hacı Adil Arda
Istanbul, Fanjakana Ottoman
Maty 6 Novambra 1922 (efa 54 taona - 55)
İzmit, Fanjakana Ottoman (Turkey ankehitriny)
Ny vady Winifred Brun
Zaza 3, ao koa ny Zeki Kuneralp
Havana Stanley Johnson (zafikelin'i), Boris Johnson (zafikelin'ny zafikeliny)
Ofisialin'ny governemanta (asa miasa), mpanao gazety, poeta
Ali Kemal Bey (Tiorka Ottoman: عَلِي كمال‌ بك; 1867 - 6 Novambra 1922) dia Tiorka teratany Ottomanika   mpanao gazety, mpamoaka gazety, poeta  ary mpanao politika an'ny sonia liberaly, izay ho an'ny sasany telo volana ny Minisitry ny Atitany ao amin'ny governemanta Damat Ferid Pasha, ilay Grande Vizier amin'ny Fanjakana Ottoman. Novonoina izy nandritra ny Ady Tiorka momba ny Fahaleovantena.
Kemal dia rain'i Zeki Kuneralp, izay masoivoho Tiorka taloha tany Soisa, United Kingdom, ary Espaina. Ankoatr'izay, izy dia raiben'ny ray aman-dreny avy amin'ny diplomantan'i Tiorka Selim Kuneralp, ary ilay mpanao politika anglisy, Stanley Johnson. Amin'ny alàlan'i Stanley Johnson, i Ali Kemal dia raiben'ny praiminisitra anglisy Boris Johnson, ary koa i Jo Johnson (solombavambahoaka ho an'ny Orpington), ny mpanao gazety Rachel Johnson, ary ny mpandraharaha Leo Johnson.
4 Septambra 2019 ao amin'ny 13: 58
Porofo iray hafa izany fa io fehezanteny io dia hanjaka amin'ny alahelo farany ataon'ny fianakavian'i satana lehibe misy an'i Jehovah, dadabeny. Fantatrao fa ilay biby goavambe dia niantso andriamanitra izay namorona ny olona tany am-boalohany tamin'ny endriny ...
Ankavia na havanana nanoratra hoe:
4 Septambra 2019 ao amin'ny 20: 23
Tsy sarotra izany:
5 Septambra 2019 ao amin'ny 07: 39
Isiraely lehibe sy ny sisa eran'izao tontolo izao?!
Ny fandaharana vaovao eran-tany ?!
Ny Fanjakana Ottoman vaovao ?!
Ny fahaverezan'i Eoropa. ?!
Ny fahafoanan'i Zio Nazi Etazonia
Lalao ratsy mampifangaro lalao satana sa hafa?
8 Septambra 2019 ao amin'ny 15: 17
Nandeha araka ny planina ny zavatra rehetra ...
“Azoko antoka fa ny firenena euro dia hanery antsika hampiditra andiana fitaovana momba ny politika ara-toekarena vaovao. Tsy azo atao ny manainga politika amin'izao fotoana izao. Fa hisy ny andro mety hivoahana ny krizy ary hisy ny fananganana fitaovana vaovao. "
- Romano Prodi, Desambra 2001
« Adala toa izany koa ianao?
Afaka mamorona ny korontana any Eropa izay hanangana ny fanjakana Ottoman ve i Boris Johnson (razamben'i Ottoman)? »
Total visits: 12.416.176
Inona no marina momba ny famonoana an'i Derk Wiersum ary inona no dikan'ny hoe "vavolombelona ny satroboninahitra"?
Martin Vrijland op Handeha ady ve eo amin'ny Etazonia sy Iran amin'izao fotoana izao?
Chris-zaza op Handeha ady ve eo amin'ny Etazonia sy Iran amin'izao fotoana izao?
Zandi Eyes op Inona no marina momba ny famonoana an'i Derk Wiersum ary inona no dikan'ny hoe "vavolombelona ny satroboninahitra"?